Nnwom 26 NA-TWI - Ɔtreneeni mpaebɔ - Bu me bem, O - Bible Gateway
Nnwom 25Nnwom 27
Nnwom 26 Nkwa Asem (NA-TWI)
26 Bu me bem, O Awurade, efisɛ, meyɛ ade trenee na mede me ho to wo so koraa. 2 Sɔ me hwɛ, Awurade, na hu m’adwene. 3 Wo dɔ a wodɔ me daa no yɛ m’akwankyerɛ; wo nokware no kyerɛ me kwan daa. 4 Me ne ahuhufo mmɔ. Me ne nyaatwomfo nni hwee yɛ. 5 Me ne nnebɔneyɛfo mmɔ, na mekwae mifi wɔn ho. 6 Awurade, mehohoro me nsa ma wuhu sɛ, menyɛ bɔne na meba mu betwa w’afɔremuka ho hyia, som wo. 7 Meto aseda nnwom na mepae mu ka w’anwonwade. 8 M’ani gye ofi a wote mu no ho, O Awurade, baabi a w’anuonyam te hɔ.